Fambolen-kazo : Tanjona ny handrakofana 40 000 ha isan-taona -
AccueilSosialyFambolen-kazo : Tanjona ny handrakofana 40 000 ha isan-taona
10/02/2018 admintriatra Sosialy 0
Napetraky ny fitondram-panjakana ho laharam-pahamehana ny fijakiana ny tontolo iainana, izay hita soritra ao anatin’ilay Vina Fisandratana 2030. Teboka iray lehibe ao anatin’io mihitsy ny fikajiana ny harena voajanahary ho an’ny fampandrosoana maharitra. Ho fanatanterahana izany, dia nametraka tanjona ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Tontolo Iainana, Haivoahary ary ny Ala fa handrakotra 40 000 hekitara isan-taona amin’ny alalan’ny fambolen-kazo. Fanombohana izany sahady ny fambolen-kazo natao teny Imerintsiatosika, izay notarihin’ny minisitry ny Tontolo Iainana, Haivoahary ary ny Ala Ndahimananjara Johanita, sy ireo mpiara-miasa akaiky avy ao amin’ny SNGF. “Mila fandraisan’andraikitry ny rehetra ny fanatanterahana ireo tetikasa fambolen-kazo indrindra indrindra izao fanombohana ny fambolena sahan’ambioka izao, satria mitaky asa izany, mitaky fiaraha-miasa sy fiaraha-miombon’antoka ihany koa”, hoy ny minisitra Ndahimananjara Johanita.
Manana andraikitra goavana amin’ity tetikasa ity koa ny SNGF, na “Silo National des Graines Forestières”, izay rantsa-mangaika eo anivon’ny minisiteran’ny Tontolo Iainana, Haivoahary ary ny Ala, satria izy no nanankinana ny famokarana ambiokan’ala sy zanakazo mba ahafahana miaro, mitahiry, mampitombo ary manatsara ireo. Mba ahafahana mamaly ny filàna mifandraika amin’ny hazo sy ny vokatra hafa azo avy amin’ny hazo sy ny ala, dia napetraka ho tanjona isan-taona ny handrakofana velaran-tany 40 000 ha amin’ny alalan’ny fambolen-kazo.
Ny fisian’ny sahan’ambiokan’ala dia antoka iray ahafahana mahatratra io tanjona io. Raha faritana tsotsotra, ny sahan’ambiokan’ala dia vondron-kazo voafantina izay hakana masombolin-kazo tsara tarazo sy tsara kalitao. Tsapa anefa ankehitriny fa noho ny fahapotehan’ny ala dia mihena ireo faritra azo hakana ambiokan’ala. Noho izany, mba ahafahany manatanteraka ny andraikitra izay iantsorohany, dia misy tetikasa vatsian’ny Vondrona Eoropeana vola eo anivon’ny SNGF, mahakasika ny fametrahana sahan’ambiokan’ala vaovao hanatevenana ireo efa misy. Voafaritra ao anatin’io tetikasa io ny fametrahana sahan’ambiokanala mirefy 150 ha, ahafahana mamokatra voan-kininina karazany roa, dia Eucalyptus grandis, na kininina lahy sy Eucalyptus robusta, na kininina vavy. Amin’ity taona 2018 ity dia velaran-tany 75 hektara no kasaina hasiana ny sahan’ambiokan’ala ka Anjozorobe, Ambongamarina, Andringitra-Ambohidratrimo, aryImerintsiatosika no toerana voakasik’izany. Ny lohahevitra voizina mandritra izany tetikasa izany dia « Sahan’ambioka, vakoka sy loharanon-kazo antoky ny ala maharitra», izany hoe ireo sahan’ambioka ireo dia sokajiana ho vakoka ho lovain-jafy, ka tokony harovana sy kajiana mba hampaharitra azy, ka ahafahany mamatsy ambioka ho an’ireo taranaka any aoriana. Ankoatra ny famokarana masomboly, ny sahan’ambioka dia manana anjara ihany koa amin’ny fanatsarana sy fanalefahana ny fikorontanan’ny toetr’andro amin’ny maha-vondron-kazo azy, ka afaka mifoka ny karbona, mitahiry zava-boary, ary miaro ny nofon-tany.